P3.91 Dhacdooyinka Dibadda Kireynta Wareegtada Wareegga LED
P3.91mm waa muuqaalka kirada ee caadiga ah oo leh cabir badan oo golaha wasiiradda ah.Waxaa si weyn loogu isticmaalay TV-ga, riwaayad, riwaayad soo jiidasho, supermarket, suuq laga dukaameysto, xaflad aroos iyo munaasabado kale oo gudaha ama banaanka ah.
1.Hayee marawaxadaha qaboojinta ama A / C, isticmaalka tamarta oo yaraada.
Caabbinta dabayshu waa yar tahay, waxay noqon kartaa kuleylka kaligiis laftiisa sababtoo ah farqiga yar.
Maaddadu waa Aluminium, aad u fudud.
4.Isticmaalka qaanso yar / jireed.
6.Shir gaar ah loogu talagalay shaashadda cabbirka weyn.
EACHINLED's taxanaha cusub ee Forwin ayaa kireysanaya bandhigyada LED-ka, nidaam bandhig oo si gaar ah loogu talagalay warshadaha kirada. Waxaa jira tabo cusub oo teknolojiyad ah, xasilooni aad u fiican iyo joogtayn, saamayn muuqaal oo aad u wanaagsan, tikniyoolajiyadda wax ku biirista muuqaal isku dhafan, iyo naqshad wanaagsan Si fudud loo rakibo loona kala furfuro, iyadoo in ka badan 30 tafaasiil la hagaajiyay, kuna habboon kirada masraxa, shirarka fiidiyaha, bandhig dhammaadka-sare ah.
1) Naqshad wanaagsan: Fikradda naqshaddu waxay ka timid qiimaha oo macnaheedu yahay sharaf iyo xoog.
2) Xadhig la’aan: Ma jiro xog ama fiilo koronto oo ku jirta modullada. Labaduba waxay kujiraan baaldi nooca pin ah. Naqshadeynta xarig-la'aanta waxay ka dhigeysaa rakibid deg deg ah, dayactir sahlan iyo awood xasiloon / gudbinta xogta.
3) Xiriirinta xog uruurinta: gudbinta xogta waxay muhiim u tahay isticmaalka kirada. Sababtaas awgeed, waxaa jira ku xirnaansho xog-uruurin. Mar haddii ay dhacdo wax dhibaato ah oo lama filaan ah, waxaa loo wareejin karaa kaydinta isla markaaba.
4) Cusbooneysiinta kaarka aqbalida: Kaararka qaata NOVASTAR A5s EMC-Class B
5) Cabbirka cabbirka caadiga ah: Gudaha, P2.97, P3.91 iyo P4.81 ayaa la heli karaa. Bannaanka, P3.91 iyo P4.81 ayaa la heli karaa.
6) Shaashadda waa la qalloocin karaa: sidoo kale waa la sameyn karaa qalooc, taas oo caan ku ah arrimaha kirada, gaar ahaan codsiyada marxaladda.
Faahfaahinta taxanaha FORWIN Dibadda Kireysiga Shaashadda LED
Sawirka Pixe 3.91mm 4.81mm
Xirnaanshaha hoggaanka SMD1921 SMD1921
Habka Sawirka 1/8 Sawir 1/13 Sawirka
Miisaanka Golaha Wasiirada 8.2KG / Cadad
Iftiin (Nits / ㎡) 5000-5500nits
Ilaalinta IP IP65